Rag Shabaab ka Tirsanaa oo xukun lagu riday!! - Muqdisho Online
Home News Rag Shabaab ka Tirsanaa oo xukun lagu riday!!
Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Arbaco ah waxa ay xukun dil ah ku ridday rag lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab,sidoo kalena ay ka qeyb qaateen weeraro iyo dilal ka dhacay Magalada Muqdisho.
Eedeyanayaasha ayaa waxaa lagu kala Magacaabaa Maxamed Cali Barrow iyo Canshuur Cismaan Abuukar,waxana Xeer ilaalinta Maxkamada Ciidamada ay sheegtay in raggaas ay ka dambeeyeen weerarkii lagu dilay Xoghayihii Ururka Haweenka Qaranka,sidoo kale ka qeyb qaateen weerarkii Hotelka Saxafi iyo qarixii ka dhacay Tiyaatarka Qaranka.
Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa fadhiga Maxkamada ka sheegay in raggaas ay sidoo kale qeyb ka qaateen abaabulka qaraxiii Xarunta degmada Howl-Wadaag iyo weeraro iyo dilal kale oo dhacay Magaalda Muqdisho.
Ugu dambeyn Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada Qalabka sida waxa uu sheegay in labada eedeysane lagu xukumay dil toogasho, isla markaana cidii aan ku qanacsaneyn ay racfaan ka qaadan karto.
Previous articleAlshabaab ayaa laga cabsi qabaa in ay la wareegaan Degamada Mahadaay
Next articleWararkii ugu dambeeyay Ciidamo soo faarujiyay Furaha iyo Muqdisho oo cabsi laga dareemay!!